Mbido nke Onwe: Otu esi ede ihe banyere m | Martech Zone
Andrew Amamihe edeela ederede miri emi banyere The Ultimate How to Guide to Building an About Me Peeji na ị ga-aga lelee n'ụzọ zuru ezu. Tinyere edemede a, o mepụtara infographic nke anyị na-ekekọrịta n'okpuru nke na-ekpuchi ụda & olu, nkwupụta mmeghe, omume, ndị na-ege ntị na ihe ndị ọzọ dị mkpa.
M hụrụ n'anya na-agbakwunye m 2 cents na ihe ndị a, ya mere ebe a na-aga. M ga-agba gị ume dị ka azụmahịa ma ọ bụ dị ka onye ọ bụla, ịga ebe dịpụrụ adịpụ na mpaghara nkasi obi gị. Amaara m na ọtụtụ ndị anaghị enwe mmasị ikwu okwu, na-enweghị mmasị na foto nke ha mere, ma na-eleda vidiyo ma ọ bụ ọdịyo nke onwe ha. Ikekwe ha kwenyere na omume a narcissistic. Ana m ahụkarị ụdị okwu ahụ na soshal midia.
Nke a bụ azịza m: Gị Banyere M peeji nke abụghị maka gị!
Selfies, vidiyo na-ekwu okwu, eserese ọkachamara, na nkọwa gị bụ maka ndị na-ege gị ntị. Ọ bụrụ na ị bụ onye ịtụnanya mmadụ na ịdị umeala n’obi… gị Gbasara m Peeji nwere iji gosipụta nke ahụ. N’ezie, ọ ga-amagbu onwe ya ma ị gwa mmadụ niile na ị dị umeala n’obi. Ma oburu na idi umeala, olee otu onye g’esi mata? You ga - echere ka gị na onye ọ bụla zute gị ka ha hụ ịdị umeala n'obi gị? Ma obu ichere ka ndi ozo gwa gi obi umeala? Ọ gaghị eme.
Y’oburu na ebum n’uche gi bu ka iwulite ikike na ndu n’elu oghere gi, ihe kachasị mma gị bụ gị. Ọ bụchaghị akwụkwọ gị, akụkọ ọrụ gị, ọ bụ gị! Ọ bụ na ị na-eme ka onye ọ bụla mara ihe ha ga-eji rụọ ọrụ gị. Ọ na-amasị ndị mmadụ iso ndị ha chọrọ ịrụ ọrụ na-arụ ọrụ. Mkpebi ịzụta na-abụkarị nke mmetụta uche na mkpebi ahụ na-adabere n'otú atụmanya gị si tụkwasị gị obi na ịchọpụta gị dị ka onye ikike n'ime ọrụ gị.
Inye ndị ọrụ nchọta ihe nchọta na ndị nleta na saịtị ahụ ihe niile ha chọrọ - okwu ndị ị megoro, ndị isi gị na ha na-akpakọrịta, akwụkwọ ndị ị dere, yana ozi nke gị.
Akụkụ akụkụ: M ikpe mara kwa! Anọ m na-adọkpụ ụkwụ m ọtụtụ afọ na-ewu a raara onwe ya nye na peeji nke na anyị ụlọ ọrụ na saịtị banyere m na-ekwu okwu… ma ndụmọdụ a si Andrew na-akpali m ka m mee ya!
Tags: gbasara mbanyere peejiwere mara ihenjirimara nke onwepeeji nke onwe
Nke a bụ nnukwu ihe.
Maka ndị nwere obi abụọ banyere ikpughe ihe omume ntụrụndụ na ọdịmma ha n'ihi na ha achọghị ịpụta ọrụ aka, ana m ekwu nke a:
Ọ bụghị banyere ọkachamara ọ bụ maka otu, otu si otu ike.
Ọ bụrụ na onye na - agụ akwụkwọ gị na - ele ịdị n’èzí n’otu ha anya, ha ga - enwe omume iwe megide gị.
Site na ikpughe obere ihe banyere ndụ gị, dịka inwe ụmụaka, ịgba ọsọ, ịhụnanya gị maka nri mexican ị ga-abanye n'ime ndị otu ebe ndị mmadụ ga-ahụ gị n'ọfụma ka mma.
Ọ dị ka mmetụta halo.
N’uche m, azịza kachasị mma bụ igosipụta onwe gị dị ka onye ntụkwasị obi. Ndị mmadụ na-achọ iji onye maara ihe, omenaala na onye na-akwụwa aka ọtọ na-azụ ahịa.
Feb 7, 2017 na 9:42 PM
Emechiela m ọtụtụ azụmahịa na-adabere na njikọta nkekọrịta ụlọ oriri na ọ myụ myụ kachasị amasị m na ndị ahịa.